औषधि टुक्राएर नखाऔं - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — चिकित्सकले औषधि लेख्दा हामीले त्यही मात्राको चक्की नपाएपछि सामान्यतः टुक्रा पारेर खाने गरेका छौं । जस्तै सिटामोल पाँच सय मिलिग्रामको पाइन्छ भने बच्चाहरूलार्य दिँदा टुक्रा पारेर ख्वाउने चलन प्रायः सबैको छ । तर यसरी औषधिलाई टुक्राएर खानुको सट्टा त्यही मात्राको औषधि सेवन गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले औषधिलाई दुई वा दुईभन्दा बढी भागमा टुक्राएर खानु धेरै घातक हुन सक्ने बताएका छन् । यसले औषधिको गलत मात्रा शरीरमा पुग्न सक्छ ।
‘जर्नल अफ एडभान्स नर्सिङ’ मा प्रकाशित अनुसन्धानले औषधिलाई टुक्राएर खाँदा गम्भीर प्रभाव हुन सक्ने देखाएको छ । अनुसन्धानअनुसार औषधिको गलत मात्रा लिनाले औषधि र विषबीच सूक्ष्म अन्तर रहन्छ ।
हामी जतिसुकै पनि औषधिलाई बराबर गरी तोडने प्रयास गर्दासमेत दुई समान मात्राको बराबर भागमा तोड्न सकिरहेका हुँदैनौं ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले चक्कीलाई बराबर भागमा तोडन विशेष प्रकारको चक्कु, औजार र कैंचीको समेत उपयोग गरे पनि बराबर मात्रा पाउन सकेनन् । अनुसन्धानअन्तर्गत जतिसुकै प्रयास गरिए पनि चक्कीलाई बराबर दुई भागमा तोडन धेरै जटिल देखियो ।
अध्ययनको निष्कर्षमा के भनियो भने, औषधिको चक्कीलाई तोडा सामान्यतः यो गैर बराबर भागमा टुक्रिन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले पाए की तोडेर लिइने ३१ प्रतिशत चक्कीमा औषधिको मात्रा गलत हुन्छ । यति मात्र नभई यसले औषधिको १५ देखि २५ प्रतिशत बढी मात्रा शरीरमा पुग्ने आशंका रहन्छ । अध्ययनले औषधि कम्पनीलाई विभिन्न मात्राको चक्की उत्पादन गर्न आग्रहसमेत गरेको हो ।
प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०८:०४
काठमाडौँ — घाटी बिग्रँदा, घाँटीमा खिसखिस हुँदा, दुख्दा सामान्यतः तपाईं आफैं पनि मन तातो नुनपानीले कुल्ला (गार्गल) गर्नुहुन्छ । चिकित्सकसँग जँचाउन जाँदासमेत तपाईंलाई औषधिसँगै नुनपानीले गार्गल गर्नसमेत भन्छन् । के यसले साँच्चै फाइदा पुग्छ ? घाँटीमा भएका ब्याक्टेरियामा नुन पानीको असर हुन्छ ? घाँटीको खराबी पछाडि केही खास प्रकारका ब्याक्टेरियाहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।
वीर अस्पतालका प्रा.डा.अनिलकुमार मिश्रका अनुसार ब्याक्टेरिया सामान्यतः मन तातो नुनपानीको सम्पर्कमा आएर समाप्त हुने होइन । ती ब्याक्टेरियाहरू धेरै जिद्दी प्रकृतिका हुन्छन् । तापनि नुनपानीको उनीहरूमा घातक असर हुन्छ । यो हुनुको पछाडि विज्ञानको ‘अस्मोसिस’ को सिद्घान्तले काम गरेर भएको हो ।
बोलचालमा भन्ने हो भने गह्रौं र हलुको द्रव्य आपसमा मिल्दा उनीहरूबीच क्रिया सुरु हुन्छ । यसैलाई अस्मोसिसको सिद्घान्त भन्छौं र त्यो क्रिया त्यति खेरसम्म जारी रहन्छ जबसम्म दुवै द्रव्यको घनत्व समान न होस् । यही क्रियाले गर्दा हामी जतिखेर गार्गल गर्छौं त्यसताका ब्याक्टेरियालाई आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न मुस्किल पर्छ ।
नुनपानी अपेक्षाकृत रूपमा गाह्रो हुन्छ । जब यो घाँटीमा पुग्छ अनि ब्याक्टेरियाको शरीरमा भएको पानी शरीरको छिद्रबाट बाहिर निस्केर नुनपानीमा मिसिन थाल्छ । यसरी ब्याक्टेरिया आफ्नो शरीरको पानी गुमाउन थाल्छन् । सुक्न थाल्छन् र अन्ततः मृत्यु हुन्छ ।
प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०८:०३